मेयरकाे १ वर्षः लक्ष्य चितुवा, गति कछुवा — samadhannews.com
मेयरकाे १ वर्षः लक्ष्य चितुवा, गति कछुवा
कर्मचारी र पार्टीको असहयोग
पोखरा, २७ बैशाख:
समृद्धिका नारा दिएर चुनाव जितेका पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी सुस्त गतिमा अघि बढेका छन् । मेयरको सुस्त कदमले विकासको दृष्टिकोणले यो १ वर्षमा महानगर पछाडि परिरहेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ । यसको चर्को दबाब मेयरले खेप्नु परेको छ ।
जिसी जसरी लोकप्रिय मतका साथ विजयी भएका थिए, त्यसरी नै जनताको मन जित्ने काम गर्न भने चाहान्छन् । काम गर्नुपर्छ नत्र ५ वर्षपछि जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने कुरामा पनि मेयर सचेत छन् । तर, परिणाम देखिएको छैन ।
‘५ वर्षमा केके गर्ने भनेर घोषणा गरेका थियौं । त्यो हामी गर्छौं गरेरै छोड्छौं,’ मेयर जिसीले भने, ‘यतिकै ५ वर्ष बिताउने हामीलाई छुट छैन । अहिलेसम्म हामीले एउटा आधार तयार पार््‍यौं अब जनताले काम देख्नेछन् ।’
भौगोलिक हिसाबमा देशकै ठूलो महानगरपालिकामा पोखरा जनप्रतिनिधि आएपछि देखिने गरी नयाँ के भयो त ? ‘अहिलेसम्म गरेका काम देखिएका छैनन् होला तर दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने योजना बनाउँदै छौं ।’
मेयर मानबहादुर जिसीसँग काम गर्ने ईच्छाशक्ति छ । ५ वर्ष नेतृत्व गरेर छोड्दा पोखरा व्यवस्थित तथा समुन्नत बनाएरै छोड्ने मेयर जिसीको प्रतिवद्धता छ । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय चलाउँदै आएका कर्मचारीको घेरा तोड्नै मेयर जिसीलाई फलामको चिउराजस्तो भएको छ ।
‘स्थानीय निकाय छँदा ठाडो तोक लगाएर नियुक्ति गरेका कर्मचारी पनि छन् । एकछत्र राज गरेका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर काम लगाउनै गाह्रो बन्यो,’ मेयर जिसीले भने, ‘सेवाग्राहीको सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नुभन्दा पनि कसरी मेयरलाई अप्ठेरोमा पार्न सकिन्छ भन्ने कर्मचारी पनि ।’
हिजो मन लागेको ठाउँमा योजना मिलाइदिने, त्यसबापत कमिसन लिने र सकेसम्म अथिति पनि आफैं बन्ने महाशाखा प्रमुख पनि छन् । अहिले तिनले त्यसो गर्न नपाउँदा मेयरको सहयोगी बन्न अझै सकेका छैनन् ।
मेयर मानबहादुर जिसी आइसकेपछि मात्रै २ जना कर्मचारी घुससहित समातिए । एमालेनिकटकै कर्मचारीले समेत उनलाई अप्ठेरो पार्ने, कार्यालयका फाइल अगाडि नबढाइदिनेसमेत हुँदा मेयर आजितसमेत बनेका थिए । ‘मेयर सबै कर्मचारीलाई मिलाएर पोखराको हितमा काम गर्न चाहन्छन् तर कतिपय कर्मचारी नै उनको बाधक छन्,’ मेयरनिकट एक कर्मचारीले बताए ।
स्वार्थ लिएर आउनेसँग मिल्ने, काम गर्नै अप्ठेरो पार्ने र मेयरलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने कर्मचारीको घेरा तोडेर बाहिर निस्कनै मेयर जिसीलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
कर्मचारीमात्रै होइन, जिसीलाई पार्टीबाट पनि सहयोग मिलेको छैन । उनलाई विकासका लागि सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने पार्टीबाटै उनी एक्लिएका छन् ।
ससाना कामबाट शुभसंकेत
पोखराका विभिन्न ठाउँमा सडक भत्किएका छन्, उस्तै खाल्डा परेका छन् । पार्किङको समस्या उस्तै छ । खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम, ढल निकाससँग समन्वय नहुँदा लामो समयदेखि कतिपय सडक बिग्रिएका छन् । पोखरा सभागृहको हालत दयनीय छ । अस्तव्यस्त अवस्थामा मेयर बनेका जिसीले एकै पटक ठूला काम गर्छु भनेर बस्नुभन्दा पनि ससाना कामबाटै शुभ संकेत दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
२ पटकसम्म पोखराको मेयर बनेका सूर्यबहादुर केसी भन्छन्, ‘गर्भबाटै जानेर आएको कोही पनि हुँदैन । उहाँ राजनीतिमा लागेको मान्छे हो तर विकासमा त्यसरी हुँदो रहेनछ । तत्काल व्यप्त समस्या सुधारेर नयाँ गुरुयोजना लाग्नुपथ्र्यो, एकैपटक ठूलो काम गर्छु भनेर लाग्दा ढिलो हुन्छ ।’
सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन तर यति धेरै असन्तुष्टिका स्वर निस्कनु आफैं महानगरमाथिको प्रश्न भएको केसीले बताए । ‘उहाँले गरेका काम प्रत्येक्ष पोखरासँग जोडिन्छ । समग्रमा पोखरा कता लैजाने हो ? त्यसको खाका १ वर्ष बितिसक्दा हातमा हुनुपथ्र्यो,’ प्रतिनिधि सभाका सदस्यसमेत रहेका केसीले भने ।
फेवातालको मापदण्ड मिच्ने संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश आएकै बेला खास मापदण्ड के हो ? व्यक्तिपिच्चेका फरकफरक मापदण्ड हटाएर समान मापदन्ड लागु गरे जनताले सधैं सम्झन्ने केसीले सुझाव दिए ।
एमाले कास्की अध्यक्ष तथा पूर्व मेयरसमेत रहेका कृष्ण थापा व्यक्ति असल भएर पनि मेयरले आफ्नो टोली बनाएर कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन् । ‘पोजेटिभ क्रियसन गर्न सक्ने र आफ्नो क्षमता देखाउने बेला नै यही हो । उहाँले अहिले राम्रो गर्नु भो भने अहिलेमात्र होइन भावी पुस्ताले पनि सम्झिरहन्छ,’ प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका थापाले भने, ‘पार्टीको घोषणा पत्र ख्याल गर्नुपर्‍यो । अरुको कुरा सुनेर निर्णय लिनुभन्दा सही कुराका लागि निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्‍यो ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विकास एक÷दुई वर्षमै नहुने कुरा भए पनि छनक भने आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सामान्य मान्छेले पनि हिजो र आजको तुलना गर्छ । सेवामा फरक हेर्छ । त्यसमा खासै गर्न नसकिएको आवाज आइरहेका छन्,’ मूल्मीले भने ।
बेला अझै बाँकी छ
मेयर मानबहादुर जिसीले काम गर्ने प्रयास नै नगरेका होइनन् । उनले थुप्रै राम्रा कामको पनि थालन्ी गरेका छन् । सुरुमा स्रोत र साधनको अभाव, कर्मचारी, दक्षजनशक्ति खाँचो भएका बेला एक वर्षमै सिंगो कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्नु अन्याय हुन्छ ।
महानगरले १७-१८ वटा कानुन बनाएको छ । महानगरलाई आवश्यक प्राविधिक परीक्षा लिएरै नियुक्त गरेको छ । कर्मचारीको काम गर्नेशैली बदल्नका लागि हरसम्मत प्रयास गरेका छन् । सेवा प्रभावकारी बनाउनकै लागि कर्मचारीको हेरफेर समेत गरेका छन् ।
फिर्के खोलाको रेखांकन र मापदण्ड मिच्नेहरुको लगत संकलन गरेर फुट ट्रयाक बनाउने योजनामा छन् । पोखराका बिग्रिएका सडकमा रिसोलिङ गर्ने काम पनि भइरहेको छ । वडा कार्यालयसम्म इन्टरनेटको पहुँच बढाउने काम भइरहेको छ ।
‘सबैभन्दा बढी यतिन्जेल हामीले प्रशासनिक सुधार र नीति निर्माणकै लाग्यौं । यो बीचमा नयाँ मापदण्ड तयार हुँदैछ । विज्ञहरुसँग विभिन्न विषयमा छलफल गरेर केही गुरुयोजना पनि बन्दैछन्,’ मेयर जिसीले भने, ‘अबको ४ वर्ष काम गर्ने समय हो ।’
मेयर जिसीले चुनावमा गरेका घोषणा पूरा गर्नका लागि अबको चार वर्ष पूरै दिलो ज्यान दिएर लाग्ने बताउँछन् । एक वर्ष नीति, नियम बनाएर अब त्यसैका आधारमा काम गर्ने हो भने ४ वर्षमा पनि धेरै विकासको जग बसाल्न सकिने वाणिज्य महासंघका मुल्मीले बताए । ‘अहिलेसम्म आफैं अलमलिएको हो कि, कहाँबाट सुरु गरौं भन्ने अन्योलले हो कि ? बुझ्न सकिएको छैन तर अबको ४ वर्ष पनि काम गर्नका लागि पर्याप्त समय हो,’ मूल्मीले भने, ‘पोखरा बिग्रनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अब केके गर्ने भनेर लाग्ने हो भने धेरै कुरा कुरा गर्न सकिन्छ ।’
विसं २०४१ र २०४६ मा आफू मेयर हुँदा जम्मा ७८ हजार जनसंख्या रहेको पोखरामा अहिले झन्डै ५ लाख पुगिसकेको अवस्थामा विकास पनि त्यही अनुरुप हुनुपर्ने केसीले बताए । ‘प्रदेशको राजधानी बनिसकेपछि पोखराको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि बढेको छ । अझै समय छ,’ उद्योगपतीसमेत रहेका केसीले भने, ‘हामी निजी क्षेत्र पनि मेयरज्यूलाई सघाउन तयार छौं ।’
पार्टीका तर्फबाट मात्रै नभएर आफ्नो अनुभवलाई पोखरासँग लगाउन आफू जहिले पनि तयार रहेको पूर्व मेयर थापाले बताए । ‘पोखरा बिग्रन्न दिन हुन्न भन्ने सबैलाई लागेको । बिग्रिसकेको पनि छैन,’ थापाले भने, ‘मेयर साबले चाहानुभयो भने म निशुल्क कन्सल्टट्यान्टको रुपमा काम गर्न तयार छु ।’
मेयरका मुख्य ५ वर्षीय योजना
पर्यटकीय सुन्दर नगरी पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीका पाँच वर्षभित्र गर्ने प्रमुख योजना पनि सुन्दर छन् । सुशासनमा जोड दिँदै व्यवस्थित र समद्ध पोखराका लागि मेयर जिसीले मुख्य ५ योजना सार्वजनिक गरेका थिए । स्मार्ट सिटी, उद्यमशील सहर, बोत्तलरहित सहर, ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी र कनेक्टीभिटी ।
चुनावताका बहुचर्चित शब्द हो, स्मार्ट सिटी । हामीले खोजेको मौलिक स्मार्ट सिटी भनेको कस्तो हो ? स्मार्ट सिटीभित्र केके पर्छन् ? स्मार्ट बनाउन केके कुरा गर्नुपर्छ भन्नेतिर भन्दा बुझ्न र बुझाउनुभन्दा यो नारामात्र बनिरहेको छ ।
महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयबाट प्रविधिमैत्री सेवा दिने र त्यसका लागि इन्टरनेटको विस्तार गर्ने मेयर जिसीको योजना थियो ।
इन्टरेटको पहुँच भएमा प्रत्येक वडाबाट जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तादेखि किसानका हरेक तथ्यांक अपडेट गर्ने मेयर जिसीले बताए । महानगरको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कर संकलनमा सहज बनाउने, पोखराका विभिन्न ठाउँमा फ्रि वाइफाई जडान गर्ने, तथ्यांकसहितको डाटा निर्माण गर्ने लगायतका योजना मेयर जिसीले बताएका छन् ।
‘प्रविधिमैत्री सहर बनाउने मुख्य योजना हो । कसैले कामै गरेन भने पनि प्रविधिमैत्री सहर निर्माणका लागि काम भइरहेका छन्,’ मेयर जिसीले भने, ‘पाँच वर्षमा भनेको काम हुन्छ ढुक्क हुनुस् ।’
मेयर जिसीको अर्को घोषणा थियो, उद्यमशील सहर । पोखरालाई उद्यमशील सहर बनाउने केके उद्यमको विकास गर्ने हो भन्ने योजना नै महानगरसँग छैन । तर, ५ वर्षको परिकल्पनाअनुसार पोखरा ‘पर्यटनको हब’को परस्पर रुपमा उद्यमीहरूको सहर भनेर चिनाउने योजना उनको छ ।
मेयर जिसीको अर्को योजना छ, घरघरै सिधै पिउन मिल्ने खानेपानी पुर्‍याउएर पोखरालाई बोतलरहित बनाउने । पाँच वर्षमा पोखरावासीले महसुस गर्ने गरी यो योजना सफल पार्ने उनले बताएका छन् ।
पोखरा महानगरलाई ८० लाख लिटर पानी प्रतिदिन आवश्यक पर्छ । तर, ४० लाख लिटर मात्रै प्राप्त छ । पोखरा क्षेत्रमा अहिले मर्दीबाट पानी आइरहेको छ । जाइकाको सहयोगमा मर्दी खानेपानी बिस्तारको अर्को छुट्टै ठूलो योजना यहाँ बन्दै छ । बर्खामा लेदो आएर पानी खान के अरु प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने खालको आउँछ । लेखनाथ क्षेत्रमा विजयपुरबाट पानी व्यवस्थित गर्ने मेयर जिसीको भनाइ छ ।
५ वर्षमा पोखरालाई ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी बनाउने र प्रत्येक वडाको कनेक्टिभिटी जोड्ने मेयर जिसीको पाँच वर्षीय अर्को योजना हो । ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी बनाउन महानगरले ‘एक घर एक विरुवा योजना’ सुनाएको थियो तर त्यसको पनि कुनै काम अगाडि बढिसकेको छैन ।
‘विकटलाई निकट र निकटलाई समृद्ध’ बनाउन मेयर जिसीले कनेक्टिभिटीमा जोड दिएका थिए । पोखराका घनासहर र सहरोन्मुख वडा छन् । ती सबै वडाको सोझो सम्बन्ध हुने गरी सडक सञ्जालले जोड्ने योजना अनुसार अहिले काम भइरहेको मेयर जिसीले बताए ।